Shakiga laga qabo Sheekh Shariif oo sii xoogeystay | KEYDMEDIA ENGLISH
Shakiga laga qabo Sheekh Shariif oo sii xoogeystay
Hadalka Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, wuxuu sii kordhiayaa shaki ku aaddan inuu hoos kala shaqeeyo Fahad Yaasiin, oo ah shaqsiga la rumeysan yahay inuu ka danbeeyo, maleegidda falalka amni darro iyo dilalka dadka ka aragtida duwan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Hadal heyn xooggan ayaa ka dhalatay, shir jaraa’id oo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, uu uga hadlayay, falalka amni darro ee ku sii baahaya waddanka, khaarijinii AUN, Xildhibaan Aamino iyo doorashoonka.
Muuqaal afar daqiiqo iyo bar ah oo Madaxweynihii 7-aad ee Soomaaliya Sheekh Shariif, uu shalay duubay, ayaa loo fasirtay inuu ku daminayay dareenka ku aaddan in weerarrdii garoonka diyaadaha Aadan Cadde iyo Baladweyne ay ahaayeen kuwa siyaasadeed.
Shariif, wuxuu si aan leex-leexad lahayn, weerarradaas ugu eedeeyay Al-Shabaab, xilli uu jiro guux xooggan oo dibad iyo gudaba leh, oo falalka amni darro oo dilka xildhibaannaddu ugu horreyo ku tilmaamaya in ay yihiin kuwo siyaasadeed iyo adeegsi Al-Shabaab.
Dadka ka fal-celiyay muuqaalka MW Shariif, waxa ay ku doodeen, in AUN, Xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi, la dilay labo cisho ka hor shirkiisa jaraa’id, waxayna is weydiiyeen waxa muuqaal intiisa badan doorasho looga hadlayo iyo dareenka jira isku soo beegay.
Shariif waxaa lagu eedeeyay in fariinta uu dirayay aysan kaliya ku socon Soomaalida ee uu doonayay inuu meesha ka saaro tuhunka danjirayaasha caalamka ee ku aaddan, in laamaha ammaanka iyo Al-Shabaab, si weyn isgu milmeen, dilal siyaasadeedna socdaan.
Shariif, waxaa si weyn loogu dhaleeceeyay, inuu Aamino ka dhigay kaliya siyaasiyad dooneysay in ay mar kale tartanto, isla-markaana uu indhaha ka qarsaday, waxa ay u taagneed, [Caddaalad-doon] iyo dareenka ay gaga tagtay bulshada Soomaaliyeed.
MW Shariif, oo farriintiisu u muuqatay mid ka timid, dhanka Madaxtooyada, waxuu muujiyay dareen ah in Al-Shabaab, hore u geysteen dilal iyo qaraxyo, isla-markaana kuwii dhawaan dhacay kuwii hore la mid ahaayeen, waana sababta carada iyo fal-celinta dhalisay.
“Inuu Sheekhu, Aamina ku soo koobo siyaasi iyo musharrax caadi ah waxa ay ka dhignaan kartaa in uu leeyahay horteed ayaa siyaasiyiin dhinteen ee ha laga gudbo, waana farriinta ay beryahaan faafinayeen taageerayaasha Villada”. Ayuu yiri Dhaalay, oo ka mid dhallinyarada firfircoon.
Shariif, waxaa hore loogu eedeeyay sidii uu uga gaabsaday kiiska Ikraan oo AUN Xildhibaan Aamino u istaagtay, siidii qoyskeedu caddaalad ku heli lahaayeen, waase la yaab inuu hadda u istaagay marin-habaabinta dilka siyaasadeed ee xildhibaanadda.
Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya, Tiina Intelmann iyo danjirayaal kale, oo reer galbeed ah, ayaa hore u muujiyay in weerarradii ka kala dhacay Muqdisho iyo Baladweyne, ahaayen kuwa siyaasadeed, lana tuhmayo wada shaqeyn labo dhinac ah.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa dhankiisa sheegay in Allaha u naxariistee xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi, ay u dhimatay, u doodisteedii cadaaladda iyo raadintii xaqa muwaadiniinta.
RW Rooble, wuxuu sheegay in weerarradu ay ahaayeen kuwo isku xiran oo abaabulan, marka la eego goobaha la beegsaday, shakhsiyaadka la bartilmaameed-saday iyo xilliga lagu soo aaddiyay, hayeeshee, Sheekh Shariif intaas uma muuqaan.
Intaas kaliya maaha, Madaxweynihii hore, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa dhankooda sheegay in weerarrada iyo beegsiga xildhibaanadda ay yihiin shirqiillo siyaasadeed.
Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare, iyo a-taliyaha Ra’iisul Wasaaraha, Cumar Dhagey, ayaa sidoo kale, Farmaajo iyo agaasimihii hore ee NISA, Fahad Yaasiin, ku eedeeyay in ay musuul ka yihiin dilka AUN, Xildhibaan Aamino.